Imiqathango yesiQinisekiso esiBanzi Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Ngaphambi kokungenela naziphi na iinkonzo esizibeka kule webhusayithi, kubalulekile ukuba ufunde imiqathango kunye nemigaqo esebenza kulungiselelo lweenkonzo ezinikezelwa ngabalandeli.online, ngokuthe ngqo kwimisebenzi yayo ephambili yemveliso okanye inkcazo yenkonzo. .: Ukuthengiswa kweemveliso kwifomathi yedijithali kunye neenkonzo zokuthengisa kwi-Intanethi.
Umsebenzisi unokufikelela kuphela kwaye aqeshe aba balandeli beenkonzo.online emva kokufunda kunye nokwamkela ezi meko zesivumelwano.
Ngokwamkela le miqathango, umsebenzisi ubotshelelwe yile migaqo, ethi, kunye nomgaqo-nkqubo wabucala, ulawule ubudlelwane bethu beshishini.
Ukuba awuvumelani neliphi na icandelo, awuyi kuba nakho ukuqesha iinkonzo ezibonelelweyo.
abalandeli.online igcina ilungelo lokutshintsha okanye lokutshintsha le meko nangaliphi na ixesha. Ukuba uhlengahlengiso lwenza utshintsho olunamandla kwimibandela, abalandeli.online baya kukwazisa ngokuthumela isaziso kule webhusayithi.
Iinkonzo ezinikezelwayo zifumaneka kubantu abasemthethweni kuphela kunye nabantu abaneminyaka yobudala eli-18.
La magama ahlaziywe okokugqibela ngomhla we-14/04/2016
Ngokuhambelana nezibonelelo zoMthetho 34/2002 ngeeNkonzo zoMbutho woLwazi kunye noRhwebo nge-Intanethi (i-LSSICE), le mininingwane ilandelayo iyabonelelwa:
Igama leNkampani: Online SL
Ukuchongwa kwi-AGPD: "Abasebenzisi kunye nababhalisi bewebhu" "abaThengi kunye nabathengisi".
• Umsebenzi wentlalo yile: Iinkonzo zokuthengisa kwi-Intanethi.
Iinkonzo ezibonelelwe kule webhusayithi
abalandeli.online yenza ukuba zifumaneke ezi nkonzo zilandelayo ngokuxhomekeke kwiimeko zabo zemvumelwano ezithile:
• Uyilo lwezicwangciso zonxibelelwano ezenziwa kwi-intanethi / ngaphandle kweintanethi.
Ukukhutshwa kokubhala kokushicilelwa kunye nokuhanjiswa kweenqanawa kuzwelonke okanye kumacandelo
Ukubhala okubhaliweyo kumxholo.
Ubudlelwane beendaba kunye neearhente.
Imifanekiso yedijithali yomshicileli, iwebhu kunye neminyhadala.
Ukugcinwa kwakhona kwe-JPG esisiseko kunye nophuhliso lwe-RAW.
• Uqeqesho olusisiseko kwifoto yedijithali.
I-SEO yokubonisana ngewebhu, ibhlog kunye ne-e-Commerce.
• I-SEO esisiseko yomxholo wewebhu.
• Uhlalutyo kunye nokudalwa kweprofayile zonxibelelwano (iphepha le-SEO)
Ukufakwa, ukumiselwa kunye nokwenza i-WordPress okanye iJoomla.
Ubume bokuqukethwe: amaphephandaba, iimagazini, iikhathalogu, iincwadi, iincwadana, i-pdf kunye ne-ebook,
• Uyilo olusisiseko lweeposta, amakhadi, iidlayida, iibhena kunye ne-CTA yewebhu.
Ukuthengisa okungaphakathi kunye nentengiso engaphakathi
Ukucwangciswa kwesicwangciso kunye nesicwangciso sentlalo.
Ukubhala komxholo kwiibhloko, iiwebhusayithi okanye imicrosites.
• Ukulawulwa kweeprofayili kunye nomxholo wentlalo (i-Facebook, i-Twitter, i-Pinterest, i-YouTube, iTuenti, iGoogle +)
• Iphulo le-SEM (i-AdWords, iiNtengiso ze-Facebook, iiNtengiso ze-Twitter)
Iindaba kunye nentengiso.
Ulawulo lobugcisa lweetafile ze-analog.
Njengombandela Ukungena kwisivumelwano seenkonzo ezinikezelwayo, uyacelwa ukuba ubhalise kwifomu ehambelana nabalandeli.online kwaye unikezele ngolwazi lokubhalisa. Ulwazi lobhaliso olunikezelayo kufuneka luchaneke, lugqibelele kwaye luhlaziywe ngalo lonke ixesha. Ukusilela ukwenza oko kubandakanya ukophulwa kwemigaqo, enokuthi ikhokelele ekuphelisweni kwesivumelwano kunye nabalandeli.online.
Izisombululo zeqela lesithathu
Ezinye iinkonzo zinokubandakanya izisombululo zomntu wesithathu. balandeli
Uyavuma ukuba leNkonzo ingabandakanya izisombululo zokhuselo ezinciphisa ukusetyenziswa kwayo kwaye kufuneka usebenzise ezi nkonzo ngokuhambelana nemithetho yokusetyenziswa esekwe ngabalandeli.online kunye namahlakani ayo okhuseleko nokuba naluphi na olunye usetyenziso olunokuthi lwenze ukwaphulwa kwelungelo lokushicilela.
Kuthintelwe ukutshintsha, ukuhambisa, ukuguqula iinjineli, ukubola, ukwahlula okanye ukuguqula nangaluphi na uhlobo itekhnoloji yokhuseleko ebonelelwe ngabalandeli.online ngaso nasiphi na isizathu.
Ukophulwa kwokhuseleko lwenkqubo okanye kwenethiwekhi kunokukhokelela kwityala loluntu okanye lolwaphulo-mthetho.
Amaxabiso kunye neendlela zokuhlawula
Uyavuma ukuhlawula iinkonzo ezenziwa ngekhontrakthi yabalandeli.yalele kwifom yentlawulo eyamkelwe ngabalandeli.online kunye nayo nayiphi na imali ehlanganisiweyo (kubandakanya irhafu kunye neentlawulo zentlawulo kade, njengoko kufanelekile)
Intlawulo ihlala iipesenti ezingama-100 ngaphambi kwexesha kwaye iinkonzo ziya kubonelelwa xa siqinisekisa intlawulo.
Amaxabiso asebenza kwimveliso nganye kunye / okanye kwinkonzo zezi zichazwe kwiwebhusayithi ngomhla woku-odola, kubandakanya, apho kufanelekileyo, yonke i-VAT (Ixabiso leXabiso elongeziweyo) kwintengiselwano ngaphakathi komda waseSpain.
Inkqubo eqhelekileyo yexabiso elongezwa kwi-European Union
Ngokuhambelana namalungiselelo oMthetho 37/1992, we-28 kaDisemba, elawula iirhafu kunye ne-European Directive 2008/8 / EC, umsebenzi unokukhululwa okanye ungaxhomekeki kuwo. kuxhomekeke kwilizwe lokuhlala komthengi kunye nemeko enza ngayo imisebenzi efanayo (usomashishini / oyingcali okanye umntu). Ngenxa yoko, kwezinye iimeko amaxabiso okugqibela alo myalelo anokutshintshwa ngokunxulumene noko kuchazwe kwiwebhusayithi.
Ixabiso leenkonzo okanye infoproductos ezithengiswe ngabalandeli.online ibandakanya i ISpanish VAT. Nangona kunjalo, ixabiso lokugqibela leodolo yakho linokwahluka ngokuxhomekeke kumgangatho we-VAT osebenza kumyalelo. Imiyalelo emiselwe amanye amazwe e-European Union, I-VAT yase-Spain iya kutsalwa kwaye irhafu ye-VAT ehambelana nelizwe esiya kulo iya kusetyenziswa. Ixabiso lokugqibela liya kuvela ngexesha lokungqinisisa iodolo yakho kwaye liyakubonisa ireyithi yeVAT ehambelana nelizwe lokuya kwiimveliso.
Amaxabiso eeNkonzo anokuthi atshintshe nangaliphi na ixesha ngokukodwa nangokhetho lwabalandeli.online. Iinkonzo aziboneleli ngokhuseleko lwamaxabiso okanye ukubuyiselwa kwemali kwimeko yokuncitshiswa kwamaxabiso okanye intengiso.
abalandeli.online yamkela ezi ndlela zokuhlawula:
Ukunyaniseka kwenkxaso kunye nokusetyenziswa okufanelekileyo
Iinkonzo kufuneka ziceliwe ngeendlela ezifanelekileyo ukuba zifunyanwe kwaye ziphendulwe ngaphakathi kwexesha elifanelekileyo.
Ezi ziteshi ziifom ezifanelekileyo ezichazwe kwinkonzo nganye ebonelelweyo.
Isicelo ngasinye siphantsi kovavanyo kunye nokuvunywa ngabalandeli.online.
abalandeli.online inokubonelela ngezisombululo ezizezinye kumthengi kubandakanya ukuthunyelwa kuthungelwano lwabalandeli.online.
Ukusetyenziswa kwesolotya elifanelekileyo
Igama "elingenamkhawulo" lixhomekeke kwigatya lokusetyenziswa elifanelekileyo. Inkcazo yokusetyenziswa ngokufanelekileyo ichongiwe ngabalandeli, kwi-intanethi, ngokubona kwayo kuphela. Abathengi abalandela kwi-intanethi bacinga ukuba bayayisebenzisa gwenxa inkonzo baya kuqhakamshelwa ngabalandeli.
abalandeli.online inelungelo lokunqumamisa inkonzo ukuba sijonga ukuba iyadlula kwisolotya elisebenzayo.
abalandeli.online ayizukuqinisekisa ukuba ukubakho kwenkonzo yale khontrakthi kuyaqhubeka kwaye akuphazamiseki, kunye nokulahleka kwedatha eyabanjelwa kumaseva ayo, ukuphazamiseka kwemisebenzi yorhwebo okanye nawuphi na umonakalo owenziwe kukusebenza kweenkonzo, okanye izinto ezilindelekileyo ezenziwe kuMthengi, ngenxa:
1. Oonobangela abangaphaya kolawulo lwabalandeli. Izizathu ezingasasebenziyo kunye / okanye oyena nobangela.
Ukuqhawuka okubangelwe kukungasebenzi ngokuchanekileyo komthengi, ngakumbi ezo zithathwe kwinkontileka yenkonzo engalunganga yohlobo lomsebenzi kunye nokusetyenziswa okwenziwe nguMthengi kunye / okanye ngumntu wesithathu kwiwebhusayithi yakhe.
3. Ukuma okuhleliweyo kunye / okanye utshintsho kulomxholo owenziwe sisivumelwano phakathi kwamaqela ukuze kulondolozwe okanye kusetyenzwe izinto ezizodwa ebezivunyelwe ngaphambili.
4. Intsholongwane, ukuhlaselwa kweekhompyuter kunye / okanye ezinye iintshukumo zomntu wesithathu ezenza ukuba kungabikho kunakho konke okanye ukubanakho ukubonelela ngeenkonzo.
5. Ukusebenza ngokungalunganga okanye ukungasebenzi kakuhle kwe-Intanethi.
6. Ezinye iimeko ezingalindelekanga.
Ngale ndlela, uMthengi uyavuma ukuthwala ezi meko ngaphakathi kwemida efanelekileyo, apho avuma ngokucacileyo ukubanga naluphi na uxanduva lwesivumelwano okanye esongezelelekileyo kwi-Online SL ngokusilela okunokwenzeka, iimpazamo kunye nokusetyenziswa kwenkonzo enesivumelwano.
I-Intanethi ye-SL ayizukuxanduva kuyo nayiphi na imeko ngeempazamo okanye ngomonakalo oveliswe kukusetyenziswa ngokungafanelekanga kunye nokholo olubi kwinkonzo nguMthengi. Kwaye i-Intanethi ye-Intanethi ayiyi kuba noxanduva lweziphumo eziphambili okanye ezincinci ngenxa yokunqongophala konxibelelwano phakathi kwe-Intanethi ye-SL kunye noMthengi xa inokubangelwa kukungasebenzi kwe-imeyile ebonelelweyo okanye ukukhohlisa kwedatha ebonelelwe nguMthengi kubhaliso lwabasebenzisi babo. .
Izizathu zokuchithwa kwesivumelwano
Ukupheliswa kwekhontrakthi yenkonzo inokwenzeka nangaliphi na ixesha ngalo naliphi na iqela.
Akunyanzelekanga ukuba uhlale nabalandeli.kuba kungonelwanga kwinkonzo yethu.
abalandeli.online inokuphelisa okanye inqumamise nayiphi na Iinkonzo ezigcinwe kunye nabalandeli.online kwangoko, ngaphandle kwesaziso okanye uxanduva ngaphambili, ukuba awuthobeli imiqathango ebekiweyo apha.
Emva kokupheliswa kwekhontrakthi, ilungelo lakho lokusebenzisa iinkonzo liza kuphela kwangoko.
Oku kulandelayo kuya kuba zizizathu zokupheliswa kwekhontrakthi:
• Intsomi, iphelele okanye inxenye, yedatha ebonelelwe kwinkqubo yesivumelwano nayiphi na inkonzo.
• Guqula, ujikeleze, unjineli, jikelezisa, hlula, hlula okanye tshintsha nangayiphi na indlela itekhnoloji yokhuseleko ebonelelwe ngabalandeli.online.
Kananjalo iimeko zokusetyenziswa gwenxa kweenkonzo zenkxaso ngenxa yemfuno yeeyure ezingaphezulu kwezo zimiselwe kwimvumelwano.
Ukuchithwa kuthetha ukuphulukana namalungelo akho kwinkonzo esayiniweyo.
Ukusebenza kwamaxabiso kunye nokunikezelwa
Iinkonzo ezinikezelwa kwiwebhu, kunye namaxabiso ezi zinto ziya kufumaneka xa zithengwa kwikhathalogu yeenkonzo eziboniswe kwiwebhusayithi. Bayacelwa abasebenzisi ukuba bafikelele kwiinguqulelo ezihlaziyiweyo zewebhusayithi ukunqanda iimpazamo zamaxabiso. Ngayiphi na imeko, ii-odolo ezikhoyo ziya kugcina imeko yazo kangangeentsuku ezisi-7 ukususela kumzuzu wokwenziwa kwawo ngokusemthethweni.
Ukurhoxa yile amandla omthengi wezinto ezilungileyo zokuyibuyisela kurhwebo ngaphakathi komthetho weentsuku ezili-14, ngaphandle kokufaka ibango okanye unike nayiphi na inkcazo okanye uhlawule isohlwayo.
Ilungelo lokurhoxisa linokungasebenzi (ngaphandle kwempazamo okanye isiphene kwimveliso okanye kwinkonzo etyikitywe), kwezi meko zilandelayo zinikezelwe kwinqaku lama-45 loMthetho wezoRhwebo:
• Izivumelwano zonikezelo lweempahla ezenziwe ngokokuchazwa komthengi okanye ngokobuqu ngokucacileyo, okanye, ngokobunjani bazo, azinakubuya okanye zinokonakala okanye ziphelelwe ngokukhawuleza.
• Iikhontrakthi zokuhanjiswa kwesandi okanye iividiyo ezirekhodiweyo, iidiski kunye neenkqubo zekhompyuter ezingavulwanga ngumthengi, kunye neefayile zekhompyuter, ezibonelelwe ngombane, ezinokukhutshelwa okanye zikhutshelwe kwakhona zisetyenziselwe isigxina.
• Kwaye ngokubanzi zonke ezo mveliso zithunyelwe kumgama ezenzelwe umlinganiso wethu: iimpahla, uphuhliso lweefoto, njl njl, okanye ezinokukhuselwa (ikopi, umculo, imidlalo yevidiyo, njl. Njl.).
Ixesha lokurhola ngaphakathi iimveliso zedijithali (ezinjengeencwadi zedijithali), ziya kumiswa ngelo xesha kusetyenziswe izitshixo zokufikelela kumxholo wedijithali.
Ilungelo lokurhoxa, ngokuhambelana nenqaku le-103.a lomthetho 1/2007, alizukusebenza ekubonelelweni kweenkonzo, nje ukuba inkonzo yenziwe ngokupheleleyo, xa kuqalile ukwenziwa, ngemvume evakalayo yangaphambili. Umthengi kunye nomsebenzisi kunye nokwamkelwa kwicala lakhe ukuba uyazi ukuba, nje ukuba ikhontrakthi yenziwe ngokupheleleyo ngabalandeli.online, uyakuphulukana nelungelo lakhe lokurhoxa.
Emva kokwamkela ukusebenza kwemisebenzi esayiniweyo, abalandeli.online, baya kukwazisa ngomhla wokuqala kwabo.
Ukuba ilungelo lesisombululo lisetyenzisiwe Iintsuku ze10 Phambi kokuqala kwenkonzo, abalandeli.online baya kubuyisela imali efunyenwe ngaphandle kokugcinwa kwaye bangaze emva kweentsuku ezili-14. Ukuba eli lungelo lithethwayo sele lisetyenzisiwe kwi ixesha elingaphantsi kweentsuku ezili-10, Iipesenti ezingama-50 zexabiso ziya kubuyiswa, kwaye ukuba uzilolonge kamva, akukho sixa sizakuhlawulwa.
Ngokunjalo, abalandeli.online inokuqhubeka ekupheliseni isivumelwano ukuba intlawulo ehambelana nayo ayenzwanga ngumsebenzisi okanye ezinye zeentshukumo ezichazwe kwicandelo lezizathu zokupheliswa kwemvumelwano zenzekile.
Ungayicima njani ikhontrakthi yenkonzo
Ukuba unqwenela ukurhoxisa isivumelwano sakho nabalandeli.online, kuya kufuneka uqhagamshelane nathi ngesicelo sokurhoxiswa kwekontrakti ngaphambi kokuba inkonzo yesivumelwano iqalile ukuqhuba (jonga inkqubo kunye nefom yokurhoxisa engezantsi)
abalandeli.online iqinisekisa umthengi ukuba abuyiselwe imali ehlawulwa kwisithuba seentsuku ezilishumi elinesine (14) zekhalenda zibaliwe ukusuka kumhla wonxibelelwano oluthembekileyo lokusebenzisa ilungelo lakhe lokurhoxa ngokuxhomekeka ekubeni oko kuyahlangabezana neemfuno kwaye zamkelwe ngu abalandeli.online.
Kwimeko yokurhoxiswa nguwe, siya kubuyisela zonke iintlawulo osifumene ngaphandle kokulibazisa okungafunekiyo kwaye, nangayiphi na imeko, kungadlulanga iintsuku ezili-14 zekhalenda ukususela kumhla esaziswe ngawo ngesigqibo sakho sokurhoxisa yesi sivumelwano kunye nokubonelela sele kwazisiwe kwiintsuku ezili-10 ngaphambi komhla wokuqalisa komsebenzi wekhontrakthi.
Siza kuqhubeka nokwenza imbuyiselo ethe kratya kusetyenziswa indlela efanayo yokuhlawula esetyenziswe nguwe kuthengiselwano lokuqala, ngaphandle kokuba unikezele ngokucacileyo ngenye indlela; Ngayiphi na imeko, awuzukufumana naziphi na iindleko ngenxa yembuyekezo.
Ukuba inkonzo eyinjongo yale khontrakthi iqalile ngexesha lokurhoxa (iintsuku ezili-14), ngokungqinelana nenqaku le-108.3 loMthetho 1/2007, i-Intanethi kwi-Intanethi inokugcina icandelo elilinganayo elihambelana nenkonzo ebonelelweyo, kubandakanya nenkonzo yenkxaso kwaye, kwimeko apho inkonzo ibonelelwe ngokupheleleyo, ngokungqinelana nenqaku le-103.a lomthetho osele ukhankanyiwe, ilungelo lokurhoxa aliyi kusebenza.
Imbuyiselo ehambelana nentlawulo eyenziwe nge-PayPal okanye i-Stripe iya kwenziwa kwisitishi esinye, ngelixa naluphi na uhlobo lwembuyiselo luya kwenziwa ngokudluliselwa kwebhanki kwiakhawunti enikezwe ngumthengi. Ukubuyiswa kwesixa-mali kuyakwenziwa ngeentsuku ezili-14 zekhalenda ukusukela ngomhla esaziswe ngawo ngesigqibo sakho sokurhoxa.
Zonke iinkonzo esikunike zona, ngohlobo lwazo, ziya kusinda xa kubhatalwa zihlawulwe ngokupheleleyo, kubandakanya, ngaphandle komda, amalungiselelo epropathi, abachasene nembuyekezo, imbuyekezo kunye nokusikelwa umda koxanduva.
Imodeli yebango okanye ifom yokurhoxisa
Umsebenzisi / umthengi unokusazisa ngesimangalo okanye ukurhoxiswa, nokuba kungaba nge-imeyile ku: info (at) abalandeli.online okanye ngeposi kwidilesi eboniswe kwifom yokurhoxisa.
Khuphela kwaye uncamathisele le fomu kwiLizwi, lizalise uze ulithumele nge-imeyile okanye ngeposi.
Ukuqwalaselwa kwe-Intanethi kwi-SL
ulwazi (e) abalandeli.online
Ngokwenjenje ndiyakwazisa ukuba ndibanga / ndiyarhoxisa kwisivumelwano sentengiso elandelayo / ulungiselelo lwenkonzo elandelayo:
Ukuqasha usuku: ………………….
Kwimeko yesikhalazo, bonisa isizathu:
UKUBA UQINISEKILEYO UMQEQESHO WOKUGQIBELA ukuxhasa ngemali ukuthenga okwenziwe kumgama, faka lo mbhalo ulandelayo kwisaziso sakho sokurhoxa:
Uyaziswa kwakhona ukuba ngokwenqaku lama-29 lomthetho we-16/2011, we-24 kaJuni, izivumelwano zokuthenga ngetyala, ukuba, ukususela oko ndiye ndarhoxa kwisivumelwano soncedo lweempahla / iinkonzo kwaye ndaxhaswa ngemali ngokupheleleyo / ngokuyinxalenye ngetyala elidityanisiweyo. Andisayi kuphinda ndiboshwe ngesivumelwano semali mboleko ngaphandle kwesigwebo.
Okulandelayo, bonisa igama lakho njengomthengi kunye nomsebenzisi okanye abasebenzisi kunye nabasebenzisi:
Ngoku bonisa idilesi yakho njengomthengi kunye nomsebenzisi okanye abasebenzisi kunye nabasebenzisi:
Chaza umhla obanga / ucime ngawo ikhontrakthi:
Sayina ibango lakho / isicelo sokurhoxa ukuba wazisiwe kwi-Online SL kwifomathi yephepha
(indawo), ukuya ……………………………… ye ……………………. Kaninzi "
Ukubuyiswa kwesixa-mali kuyakwenziwa ngeentsuku ezili-14 zekhalenda ukusukela ngala mhla wamkelweyo.
Imigaqo yabathengi baseYurophu
Ikhomishini yaseYurophu idale iqonga lokuqala laseYurophu lokusombulula iimbambano kurhwebo lwe-Intanethi olugutyungelwe ngumthetho wabathengi bamva nje. Ngale ndlela, njengoxanduva lweqonga lokuthengisa elikwi-Intanethi, sinomsebenzi wokwazisa abasebenzisi bethu ngobukho beqonga elise-intanethi lokusombulula enye imbambano.
Sebenzisa iqonga lokusombulula ungquzulwano, umsebenzisi makasebenzise eli khonkco lilandelayo: http://ec.europa.eu/odr
Ngokuhambelana noMthetho weOrganic 15/1999, we-13 kaDisemba, kuKhuselo lweDatha yobuNtu, i-Intanethi SL yazisa umsebenzisi ukuba kukho ifayile yedatha eyeyaziwa njenge "Abaxhasi / abaXhasi" eyenziwe nangaphantsi koxanduva I-Intanethi kwi-Intanethi ngeenjongo ezifanelekileyo zonyango phakathi kwazo zezi:
1. a) Ulawulo lobudlelwane bezomthetho nezoqoqosho phakathi komnini nabathengi bakhe.
2. b) Ukulawulwa kwekhontrakthi yenkonzo kunye nomthengi.
Ukuya kwinqanaba eligunyazisiweyo ngumntu onomdla; ukuba luxanduva lomsebenzisi ukuchaneka okufanayo.
Ukuba kuchasene noko, umnini wedatha uyavuma ngokucacileyo kwintsebenzo iyonke yeedatha ezigqityiweyo okanye ezichaziweyo ngexesha elifanelekileyo lokufezekisa iinjongo esele zichaziwe.
I-Intanethi ye-SL izinikele ekufezekiseni uxanduva lwayo lokugcina idatha yobuqu kunye nomsebenzi wayo wokuyigcina, kunye nokwamkela amanyathelo okhuseleko afunwa ngumthetho ofanelekileyo ukunqanda utshintsho, ilahleko, unyango okanye ukufikelela okungagunyaziswanga, njalo ngokobuchwephesha obukhoyo.
Umsebenzisi unokuyalela unxibelelwano lwakho kwaye asebenzise amalungelo okufikelela, ukulungiswa kwakhona, ukucinywa kunye nenkcaso nge-imeyile: ulwazi (at) abalandeli.kuboniswa kunye nobungqina obuqinisekileyo emthethweni, njengefoto ye-DNI okanye efanayo, ebonisa kwisifundo " UKHUSELEKO OLULANDELAYO ".
La magama axhomekeke kwi umgaqo-nkqubo Kwi-Intanethi SL.
Lonke ulwazi kunye namaxwebhu asetyenzisiweyo ngexesha lesivumelwano, uphuhliso kunye nokwenziwa kweemeko zesivumelwano ezilawula ubudlelwane phakathi kwe-Intanethi ye-SL kunye noMthengi ziyimfihlo. Ulwazi oluyimfihlo aluyi kuqondwa njengaleyo ichazwa ngesivumelwano phakathi kwamaqela, leyo iba luluntu ngesizathu esinye okanye ekufuneka ichazwe ngokuhambelana nomthetho okanye ngesigqibo sezomthetho segunya elifanelekileyo, kwaye oko kufunyenwe umntu wesithathu ongekho phantsi kwayo nayiphi na imbopheleleko yokugcinwa kwemfihlo. Omabini la maqela anyanzelekile ukuba athobele uxanduva lokugcina imfihlo kwaye ayigcine ubuncinci isithuba seminyaka emibini (2) emva kokuphela kwale miqathango ikhankanywe apha ngasentla elawula ubudlelwane be-Intanethi ye-SL kunye noMthengi.
Lonke ulwazi olufunyenwe ngumthengi, nokuba yimifanekiso, izicatshulwa, idatha yokufikelela njengabasebenzisi kunye neephasiwedi ze-WordPress, ukubamba okanye ezinye, ziya kuphathwa ngokufihlakeleyo, ukuhanjiswa kubantu besithathu akunqatshelwe ngaphandle kokuba sinemvume yakho kwaye injongo enye apho idatha ifunyenwe.
fans.online igcina ilungelo lokwenza, nangaliphi na ixesha kwaye ngaphandle kwesaziso sangaphambili, uhlengahlengiso kunye nohlaziyo kulwazi oluqulathwe kwiWebhusayithi, ukumiselwa kwayo kunye nokubonisa, iimeko zokufikelela, iimeko zesivumelwano, njl. . Ke umthengisi kufuneka afikelele kwiinguqulelo zephepha elihlaziyiweyo.
Akukho meko abalandeli.online inoxanduva lwayo nayiphi na into yokwaphula imvumelwano eyenzeka kwicala lakho, ukungahoyi ngokubhekisele kwindawo, inkonzo okanye nawuphi na umxholo, kuyo nayiphi na izibonelelo ezilahlekileyo, ilahleko yokusetyenziswa, okanye okwenyani, okhethekileyo, ngomonakalo ongathanga ngqo, ngengozi, okohlwayayo okanye okubangelwa lulo naluphi na uhlobo olusuka ekusetyenzisweni gwenxa kwezixhobo ezibonelelweyo.
Olona xanduva lwabalandeli.online, iya kuba kukubonelela ngenkonzo yokubhengeza isivumelwano phantsi kwemiqathango ebekiweyo kulo mgaqo-nkqubo wesivumelwano.
abalandeli.online abayi kuba noxanduva ngenxa yazo naziphi na iziphumo, ukonakala okanye ilahleko enokubakho ngokusetyenziswa okungalunganga kweemveliso okanye iinkonzo ezibonelelweyo.
Ipropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda kunye nomzi mveliso
I-Intanethi ye-SL ingumnini wawo onke amalungelo ezentengiso kunye nepropathi enomgangatho wabalandeli kwiphepha elikwi-intanethi, nakwizinto eziqulathwe kuyo, kubandakanya neemagazini ezinokukhutshelwa kwiwebhu.
Akuvunyelwe ngokungqongqo ukuguqula, ukuhambisa, ukusasaza, ukusebenzisa kwakhona, ukuhambisa okanye ukusebenzisa konke okanye inxenye yomxholo wephepha ukulungiselela iinjongo zoluntu okanye zorhwebo ngaphandle kwemvume ye-Intanethi ye-SL.
Ukophulwa kwalo naliphi na ilungelo elichaziweyo apha ngasentla kunokubandakanya ukwaphulwa kwezi zibonelelo, kunye nolwaphulo-mthetho olohlwaywa ngokuhambelana nezobugcisa. 270 et seq. Ikhowudi yangoku yolwaphulo-mthetho.
Kwimeko apho umsebenzisi anqwenela ukwenza ingxelo ngayo nayiphi na into eyenzekileyo, avakalise okanye enze ibango, unokuthumela i-imeyile kule info (at) abalandeli.online ebonisa igama lakhe kunye nefani, inkonzo ifunyenwe kwaye ichaza izizathu zesicelo sakhe.
Ukuqhakamshelana ne-Intanethi SL okanye ukuphakamisa nayiphi na intandabuzo, umbuzo okanye ibango, ungasebenzisa nayiphi na kwezi ndlela zilandelayo:
I-imeyile: info (at) abalandeli.online
Ulwimi eza kugqitywa ngalo ikhontrakthi phakathi kwabalandeli.online kunye noMthengi sisiSpanish.
Ulawulo kunye nemithetho esetyenziswayo
abalandeli.online kunye UMSEBENZI, uya kulawulwa ukulungisa nayiphi na impikiswano enokuthi ivele ekufikeleleni, okanye ukusetyenziswa kwale webhusayithi, ngumthetho waseSpain, kwaye ungenise kwiiNkundla nakwiNkundla zeSixeko saseGranada.